Nosamborina i Takrooz, Bilaogera Bahrainita Mpanaraby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2014 15:12 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, Swahili, polski, Español, English
Bahrainita marobe no niditra Twitter ny ampitso mba hiampanga ny fisamborana, ary nilaza fa tsy ilaina izany satria tsy misy dikany ary nampiseho mazava ny tena lokon'ny governemanta ihany koa amin'ny fanampenana izay feo manohitra antserasera. Marobe ireo mpiserasera efa nosamborin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny fihetsiketseham-panoherana ny governemanta tao Bahrain tamin'ny 14 Febroary 2011. Anisan'izany i Mahmood Al-Yousif, Mohamed Almaskati ary ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices Mohamed Hasan.
Sokajiana ho fahavalon'ny aterineto i Bahrain araka ny filazan'ny tatitra 2014 avy amin'ny “Reporters without Borders ary mitana ny laharana faharoa amin'ny fanagadrana mpanoratra gazety isan'olona tamin'ny taona 2013 araka ny tatitra avy amin'ny Komity Mpiaro ny Mpanoratra gazety.
Efa nisambotra mpisera Twitter, Mnarfezhom, mpanohana ny governemanta i Barhain, izay navotsotra tamin'ny alalan'ny fandoavana onitra, eo am-piandrasana ny fitsarana azy. Kaonty efatra miavaka manevateva sy manala-baraka olona, manohintohinana ny voninahitra sy ny lazan'izy ireo, manaraby ny fianakaviana Bahrainita amin'ny fampiasana teny tsy mendrika ao amin'ny kaonty media sosialy Twitter sy Instagram amin'ny alalan'ny anarana Al Raqeeb, Ahfad Al Waleed, Ahfad Omar sy Mnarfezhom no niampangana an'i Mnarfezhom.